Hokkaido wolf | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > Hokkaido wolf
यदी हजुर कतै जंगल तिर हाईकिङ जादै हुनुहुन्छ भने पनि जापानी ब्वासो देख्नु हुने छैन। किन होला सोच्नु भएको छ ? किनकि जापानी ब्वासोहरु धेरै पहिले नै लोप भैसकेका छन्। जापानको अन्तिम ब्वासोको मृत्यु सन् १९०५ मा भएको हो। के भएर चाहि जापनमा यी ब्वासोहरु १०० वर्ष अगाढीनै लोप भएका हुन् त ? आउनुहोस आज…